ယခုလအတှငျး ထှကျရှိလာမယျ့ League of Legends: Wild Rift (Alpha ဗားရှငျး) ထဲမှာ ဘာတှပေါလာမလဲ? – Gaming Noodle
မိုဘိုငျးလျဂိမျးပရိသတျမြား ကာလရှညျကွာစှာ စောငျ့မြှျောနခေဲ့ကွတဲ့ League of Legends: Wild Rift ရဲ့ alpha ဗားရှငျးဟာ ယခုလအတှငျးမှာပဲ ထှကျပျေါလာတော့မှာပါ။ Riot ဟာ Wild Rift ကို အပွီးသတျတရားဝငျ မထုတျသေးခငျ ယခု alpha ဗားရှငျးနဲ့ စမျးသပျဖို့ ရညျရှယျထားတာဖွဈပွီး ဘရာဇီးနဲ့ ဖိလဈပိုငျ ၂ နိုငျငံမှာသာ ဖွနျ့ခြိသှားမှာလညျး ဖွဈပါတယျ။
Wild Rift ရဲ့ alpha စမျးသပျကာလဟာ ဇှနျလ ၆ ရကျနကေ့နေ ၂၇ ရကျနအေ့ထိ ကွာမွငျ့မှာဖွဈပွီး android ဖုနျးမြားပျေါကနသော ကစားခှငျ့ရမှာလညျး ဖွဈပါတယျ။ Wild Rift ရဲ့ alpha ဝငျရောကျခှငျ့အတှကျ pre-register ကွိုတငျပွုလုပျထားသူမြားအနကျမှ အခြို့ကိုသာ ကနျ့သတျပွီး ကပြနျးရှေးခယျြသှားမှာဖွဈတယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့လအကုနျပိုငျးမှာတော့ Riot ရဲ့ developer မြားဟာ Wild Rift အတှငျး ပါဝငျလာမယျ့ အကွောငျးအရာ မြားကို ၁၄ မိနဈစာ ဗီဒီယိုနဲ့ ရှငျးလငျးပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။ ယငျးဗီဒီယိုအတှငျးမှာ Wild Rift ကို အခွားသော မိုဘိုငျးလျ MOBA ဂိမျးမြားလိုပဲ dual stick control နဲ့ ကစားရမှာဖွဈကွောငျး အတညျပွု ပွောကွားသှားခဲ့သလို Wild Rift အတှငျး ပါဝငျလာမယျ့ ခနျြပီယံမြား၊ skill မြား၊ summoner spell မြား၊ rune မြား၊ item မြားနဲ့ map အကွောငျးမြားတို့ကိုလညျး ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
Wild Rift ခနျြပီယံမြား
League of Legends အတှငျးမှာ ကိုငျတှယျကစားနိုငျတဲ့ ဂိမျးဇာတျကောငျမြားကို အခွား MOBA ဂိမျးမြားမှာလို ဟီးရိုးလို့ မချေါပဲ ခနျြပီယံလို့ ချေါဝျေါသုံးနှုနျးကွပါတယျ။ PC ပျေါက League of Legends အတှငျးမှာ ခနျြပီယံပေါငျး ၁၅၀ ကြျော ပါဝငျပမေယျ့ Wild Rift စတငျထှကျရှိစဉျမှာတော့ ယငျးတို့ထဲက ၃၆ ကောငျသာ ပါဝငျလာဦးမယျလို့ ဆိုပါတယျ။
Wild Rift ထဲမှာ ပါဝငျလာမယျ့ ခနျြပီယံမြားစာရငျးကတော့
Top Lane – Garen, Fiora, Camille, Nasus, Jax, Malphite
Jungle – Master Yi, Vi, Graves, Olaf, Gragas, Shyvana, Tryndamere, Xin Zhao
Mid Lane – Ahri, Annie, Lux, Aurelion Sol, Orianna, Fizz, Twisted Fate, Yasuo, Ziggs
ADC – Jhin, Ezreal, Miss Fortune, Jinx, Ashe, Vayne
Support – Blitzcrank, Janna, Soraka, Nami, Braum, Alistar
Wild Rift ခနျြပီယံမြားရဲ့ skill မြားဟာ မူလ PC ဗားရှငျးပျေါက ခနျြပီယံမြားနဲ့ အလှနျဆငျတူပမေယျ့ မိုဘိုငျးလျပလကျဖောငျးနဲ့ ကိုငျညီအောငျ ပွောငျးလဲခကျြမြားတော့ ရှိပါတယျ။ ကွီးမားတဲ့ ပွောငျးလဲမှုမြားအနကျ ဥပမာထဲကတဈခုကတော့ Wild Rift ထဲက Shyvana ကို dragon မြား kill ရငျး stack မြားနဲ့ မတူညီတဲ့ buff မြား ရရှိလာအောငျ ပွုပွငျထားခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ Nasus ရဲ့ stack မြားကို ပိုမိုမွနျဆနျစှာ ပွုလုပျနိုငျအောငျ ပွုပွငျထားခွငျး၊ Miss Fortune ရဲ့ Q ကို ထောကျသုံး skill အဖွဈကနေ လှတျလပျစှာ ခြိနျသုံးနိုငျအောငျ ပွောငျးလဲထားခွငျး၊ Vayne ရဲ့ W ကို passive သီးသနျ့အဖွဈကနေ passive လညျး ပါဝငျပွီး နှိပျသုံးလို့လညျးရတဲ့ skill အဖွဈ ပွောငျးလဲထားခွငျး စ တာတှကေိုလညျး ဗီဒီယိုအတှငျးမှာ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Nami လိုမြိုး လုံးဝမပွောငျးလဲတဲ့ ခနျြပီယံမြား ရှိသေးကွောငျးကိုလညျး ဆိုထားပါတယျ။
Summoner spell မြား
Summoner spell မြားကိုတော့ PC ဗားရှငျးအတိုငျး ကစားသမားတဈဦးလြှငျ ၂ ခုစီ ယူပွီး အသုံးပွုနိုငျကွမှာပါ။ Jungler မြားအတှကျ smite ကို အနညျးငယျပွောငျးလဲထားပွီး teleport ကတော့ Wild Rift အတှငျးမှာ ပါဝငျလာခွငျး မရှိပါဘူး။
Wild Rift အတှငျး ပါဝငျလာမယျ့ rune စနဈဟာ အလှနျရိုးရှငျးပွီး major keystone စုစုပေါငျး ၈ ခုသာ ပါဝငျပါတယျ။ ကစားသူဟာ ယငျး major keystone တဈခုကို minor keystone ၃ ခုနဲ့ တှဲဖကျကစားနိုငျမှာဖွဈပွီး PC ဗားရှငျးမှာ မပါဝငျတဲ့ keystone သဈမြားကိုလညျး Wild Rift အတှငျးထညျ့သှငျးထားပါတယျ။
ကစားသူမြားဟာ ယငျးတို့ရဲ့ ခနျြပီယံမြားအတှကျ item မြားကို fountain ကို ပွနျပွီးမှသာ ဝယျယူနိုငျကွမှာပါ။ ကိုငျတှယျထားတဲ့ ခနျြပီယံနဲ့ သငျ့တျောတဲ့ item ပေးခကျြမြား ပါဝငျမှာဖွဈပွီး အသုံးပွုလို့ရတဲ့ active item ကို ကစားသမားတဈဦးလြှငျ တဈခုသာ ဝယျယူနိုငျအောငျ ကနျ့သတျထားပါတယျ။
ထူးခွားတာက ယငျး active item မြားဟာ ဖိနပျမြား (boots) မြားကို third tier အထိ အဆငျ့မွှငျ့ ထားခွငျးမြားသာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ active item ဝယျယူလိုသူမြားဟာ ဖိနပျမဖွဈမနေ ဝယျယူဖို့လိုပွီး ယငျးနောကျမှာမှ အခွအေနအေရ ထပျမံအဆငျ့မွှငျ့သှားကွရမှာလညျး ဖွဈပါတယျ။
Wild Rift အတှငျးမှာ nexus turrets မြားနဲ့ inhibitor မြား ထညျ့သှငျးထားခွငျး မရှိပါဘူး။ Inhibitor turret မြားကိုသာ inhibitor အသှငျပွောငျးလဲထားပွီး nexus ကိုလညျး turret အသှငျ ပဈခတျနိုငျအောငျ ပွုလုပျထားပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ blue buff နဲ့ red buff မြားဟာ ဂိမျးရဲ့အခြိနျကွာမွငျ့လာတာနဲ့အမြှ ပိုမိုအစှမျးထကျတဲ့အသှငျပုံစံကို ပွောငျးလဲလာကွမှာပါ။ Elder elemental dragon မြား ပျေါလာဖို့ အခြိနျကွာမွငျ့ပမေယျ့ ယငျးတို့ဟာ ထိရောကျကောငျးမှနျလှတဲ့ buff မြားကို ပေးစှမျးနိုငျကွမှာလညျး ဖွဈပါတယျ။
Alpha ဗားရှငျးအတှငျးမှာ rank system ပါဝငျလာမှာဖွဈပွီး ယငျးမှတဈဆငျ့ Riot ဟာ ကစားသမားမြားရဲ့ ယှဉျပွိုငျကစားနမှေုအခွအေနမြေားကို စောငျ့ကွညျ့တိုငျးတာသှားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။ Wild Rift ဟာ အခမဲ့ ကစားနိုငျမယျ့ free to play ဂိမျးဖွဈပမေယျ့ ခနျြပီယံမြားကိုတော့ ဂိမျးတှငျး currency နဲ့ ဝယျယူကွရမှာပါ။ Skin မြားနဲ့ cosmetic item မြားလညျး ပါဝငျလာမှာဖွဈပမေယျ့ မဝယျမဖွဈအနအေထားမဟုတျပဲ ယှဉျပွိုငျကစားမှု ကသာ အဓိကဖွဈလာမယျလို့လညျး ဆိုထားပါသေးတယျ။
Regional alpha အတှငျးမှာ ပါဝငျနိုငျဖို့အတှကျ minimum requirements အဖွဈ
• CPU: 8 Core, 1.5 GHz and above, 64-bit processors only
• RAM: 3GB and above
• Resolution: 1280 × 720 and above
တို့ လိုအပျမှာဖွဈပွီး တရားဝငျထှကျရှိလာခြိနျမှာတော့ minimum requirements
• CPU: 4-core, 1.5 Ghz and above, 32-bit or 64-bit processors
• RAM: 1.5GB and above
သာ လိုအပျမှာပါ။ iOS အသုံးပွုသူမြားကတော့ iPhone6နဲ့အထကျရှိဖို့ လိုအပျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကွညောခကျြမြားအရ Wild Rift ဟာ လိုအပျခကျြ မမြားပွားလှနျးလှတဲ့ဂိမျးတဈခုဖွဈတယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။
/dev diary: May 2020 – Gameplay Reveal
Brand new gameplay,alimited Android alpha test for players in Brazil and the Philippines, andawhole lotta montages. Join exec producer Michael “Riot Paladin” Chow and the Wild Rift team foradeep dive /dev diary from home.TIMESTAMPS0:00 – Intro with Michael 0:22 – BR and PH Android alpha details1:46 – Champions update with David6:40 – Gameplay overview with Jonathan11:57 – Skins overview with Christina13:44 – Outro
Posted by League of Legends: Wild Rift on Thursday, 28 May 2020
အသေးစိတျအခကျြအလကျမြားကိုတော့ Riot က ထပျမံကွညောမှသာ သိရှိနိုငျကွမှာပါ။ PC ပျေါမှာ League of Legends အတှအေ့ကွုံမြားပွားခဲ့တဲ့ Gaming Noodle ရဲ့ admin မြားကလညျး ခနျြပီယံ guide မြား ရေးသားပေးသှားဦးမှာဖွဈလို့ စောငျ့မြှျောဖတျရှုကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျရပါတော့တယျ။ Esports အကွောငျးအရာမြားနဲ့ သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျတငျဆကျပေးလကျြရှိပါတယျ။
source: win.gg, Wild Rift official facebook
ယခုလအတွင်းထွက်ရှိလာမယ့် League of Legends: Wild Rift (Alpha ဗားရှင်း) ထဲမှာ ဘာတွေပါလာမလဲ?
မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းပရိသတ်များ ကာလရှည်ကြာစွာ စောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတဲ့ League of Legends: Wild Rift ရဲ့ alpha ဗားရှင်းဟာ ယခုလအတွင်းမှာပဲ ထွက်ပေါ်လာတော့မှာပါ။ Riot ဟာ Wild Rift ကို အပြီးသတ်တရားဝင် မထုတ်သေးခင် ယခု alpha ဗားရှင်းနဲ့ စမ်းသပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပြီး ဘရာဇီးနဲ့ ဖိလစ်ပိုင် ၂ နိုင်ငံမှာသာ ဖြန့်ချိသွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Wild Rift ရဲ့ alpha စမ်းသပ်ကာလဟာ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့ကနေ ၂၇ ရက်နေ့အထိ ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီး android ဖုန်းများပေါ်ကနေသာ ကစားခွင့်ရမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Wild Rift ရဲ့ alpha ဝင်ရောက်ခွင့်အတွက် pre-register ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားသူများအနက်မှ အချို့ကိုသာ ကန့်သတ်ပြီး ကျပန်းရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လအကုန်ပိုင်းမှာတော့ Riot ရဲ့ developer များဟာ Wild Rift အတွင်း ပါဝင်လာမယ့် အကြောင်းအရာ များကို ၁၄ မိနစ်စာ ဗီဒီယိုနဲ့ ရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ယင်းဗီဒီယိုအတွင်းမှာ Wild Rift ကို အခြားသော မိုဘိုင်းလ် MOBA ဂိမ်းများလိုပဲ dual stick control နဲ့ ကစားရမှာဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု ပြောကြားသွားခဲ့သလို Wild Rift အတွင်း ပါဝင်လာမယ့် ချန်ပီယံများ၊ skill များ၊ summoner spell များ၊ rune များ၊ item များနဲ့ map အကြောင်းများတို့ကိုလည်း ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
Wild Rift ချန်ပီယံများ
League of Legends အတွင်းမှာ ကိုင်တွယ်ကစားနိုင်တဲ့ ဂိမ်းဇာတ်ကောင်များကို အခြား MOBA ဂိမ်းများမှာလို ဟီးရိုးလို့ မခေါ်ပဲ ချန်ပီယံလို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းကြပါတယ်။ PC ပေါ်က League of Legends အတွင်းမှာ ချန်ပီယံပေါင်း ၁၅၀ ကျော် ပါဝင်ပေမယ့် Wild Rift စတင်ထွက်ရှိစဉ်မှာတော့ ယင်းတို့ထဲက ၃၆ ကောင်သာ ပါဝင်လာဦးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Wild Rift ထဲမှာ ပါဝင်လာမယ့် ချန်ပီယံများစာရင်းကတော့
Wild Rift ချန်ပီယံများရဲ့ skill များဟာ မူလ PC ဗားရှင်းပေါ်က ချန်ပီယံများနဲ့ အလွန်ဆင်တူပေမယ့် မိုဘိုင်းလ်ပလက်ဖောင်းနဲ့ ကိုင်ညီအောင် ပြောင်းလဲချက်များတော့ ရှိပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုများအနက် ဥပမာထဲကတစ်ခုကတော့ Wild Rift ထဲက Shyvana ကို dragon များ kill ရင်း stack များနဲ့ မတူညီတဲ့ buff များ ရရှိလာအောင် ပြုပြင်ထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Nasus ရဲ့ stack များကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပြုလုပ်နိုင်အောင် ပြုပြင်ထားခြင်း၊ Miss Fortune ရဲ့ Q ကို ထောက်သုံး skill အဖြစ်ကနေ လွတ်လပ်စွာ ချိန်သုံးနိုင်အောင် ပြောင်းလဲထားခြင်း၊ Vayne ရဲ့ W ကို passive သီးသန့်အဖြစ်ကနေ passive လည်း ပါဝင်ပြီး နှိပ်သုံးလို့လည်းရတဲ့ skill အဖြစ် ပြောင်းလဲထားခြင်း စ တာတွေကိုလည်း ဗီဒီယိုအတွင်းမှာ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Nami လိုမျိုး လုံးဝမပြောင်းလဲတဲ့ ချန်ပီယံများ ရှိသေးကြောင်းကိုလည်း ဆိုထားပါတယ်။
Summoner spell များ
Summoner spell များကိုတော့ PC ဗားရှင်းအတိုင်း ကစားသမားတစ်ဦးလျှင် ၂ ခုစီ ယူပြီး အသုံးပြုနိုင်ကြမှာပါ။ Jungler များအတွက် smite ကို အနည်းငယ်ပြောင်းလဲထားပြီး teleport ကတော့ Wild Rift အတွင်းမှာ ပါဝင်လာခြင်း မရှိပါဘူး။
Wild Rift အတွင်း ပါဝင်လာမယ့် rune စနစ်ဟာ အလွန်ရိုးရှင်းပြီး major keystone စုစုပေါင်း ၈ ခုသာ ပါဝင်ပါတယ်။ ကစားသူဟာ ယင်း major keystone တစ်ခုကို minor keystone ၃ ခုနဲ့ တွဲဖက်ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး PC ဗားရှင်းမှာ မပါဝင်တဲ့ keystone သစ်များကိုလည်း Wild Rift အတွင်းထည့်သွင်းထားပါတယ်။
ကစားသူများဟာ ယင်းတို့ရဲ့ ချန်ပီယံများအတွက် item များကို fountain ကို ပြန်ပြီးမှသာ ဝယ်ယူနိုင်ကြမှာပါ။ ကိုင်တွယ်ထားတဲ့ ချန်ပီယံနဲ့ သင့်တော်တဲ့ item ပေးချက်များ ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး အသုံးပြုလို့ရတဲ့ active item ကို ကစားသမားတစ်ဦးလျှင် တစ်ခုသာ ဝယ်ယူနိုင်အောင် ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
ထူးခြားတာက ယင်း active item များဟာ ဖိနပ်များ (boots) များကို third tier အထိ အဆင့်မြှင့် ထားခြင်းများသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် active item ဝယ်ယူလိုသူများဟာ ဖိနပ်မဖြစ်မနေ ဝယ်ယူဖို့လိုပြီး ယင်းနောက်မှာမှ အခြေအနေအရ ထပ်မံအဆင့်မြှင့်သွားကြရမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Wild Rift အတွင်းမှာ nexus turrets များနဲ့ inhibitor များ ထည့်သွင်းထားခြင်း မရှိပါဘူး။ Inhibitor turret များကိုသာ inhibitor အသွင်ပြောင်းလဲထားပြီး nexus ကိုလည်း turret အသွင် ပစ်ခတ်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် blue buff နဲ့ red buff များဟာ ဂိမ်းရဲ့အချိန်ကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှ ပိုမိုအစွမ်းထက်တဲ့အသွင်ပုံစံကို ပြောင်းလဲလာကြမှာပါ။ Elder elemental dragon များ ပေါ်လာဖို့ အချိန်ကြာမြင့်ပေမယ့် ယင်းတို့ဟာ ထိရောက်ကောင်းမွန်လှတဲ့ buff များကို ပေးစွမ်းနိုင်ကြမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Alpha ဗားရှင်းအတွင်းမှာ rank system ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီး ယင်းမှတစ်ဆင့် Riot ဟာ ကစားသမားများရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားနေမှုအခြေအနေများကို စောင့်ကြည့်တိုင်းတာသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Wild Rift ဟာ အခမဲ့ ကစားနိုင်မယ့် free to play ဂိမ်းဖြစ်ပေမယ့် ချန်ပီယံများကိုတော့ ဂိမ်းတွင်း currency နဲ့ ဝယ်ယူကြရမှာပါ။ Skin များနဲ့ cosmetic item များလည်း ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပေမယ့် မဝယ်မဖြစ်အနေအထားမဟုတ်ပဲ ယှဉ်ပြိုင်ကစားမှု ကသာ အဓိကဖြစ်လာမယ်လို့လည်း ဆိုထားပါသေးတယ်။
Regional alpha အတွင်းမှာ ပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက် minimum requirements အဖြစ်
တို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး တရားဝင်ထွက်ရှိလာချိန်မှာတော့ minimum requirements
သာ လိုအပ်မှာပါ။ iOS အသုံးပြုသူများကတော့ iPhone6နဲ့အထက်ရှိဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြေညာချက်များအရ Wild Rift ဟာ လိုအပ်ချက် မများပြားလွန်းလှတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့ Riot က ထပ်မံကြေညာမှသာ သိရှိနိုင်ကြမှာပါ။ PC ပေါ်မှာ League of Legends အတွေ့အကြုံများပြားခဲ့တဲ့ Gaming Noodle ရဲ့ admin များကလည်း ချန်ပီယံ guide များ ရေးသားပေးသွားဦးမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတော့တယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။